ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့် ဆေးကုသခွင့်လက်မှတ် အသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ဒေါက်တာ နန်းမွေစံ - Real News
Home Cele News ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့် ဆေးကုသခွင့်လက်မှတ် အသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ဒေါက်တာ နန်းမွေစံ
ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့် ဆေးကုသခွင့်လက်မှတ် အသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ဒေါက်တာ နန်းမွေစံ
ဆရာဝန်မလေး နန်းမွေစံက Sexy Model တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလမ်းမမှာ နာမည်ကြီးသူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုရိသကိုကိုတွေ စွဲမက်စေတဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှနဲ့ မြန်မာဆန်တဲ့ သူမရဲ့ ရုပ်ရည်ကြောင့် အားပေးသူ ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရရှိထားသူလေးတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ နန်းမွေစံက လက်ရှိမှာတော့ ဆရာဝန်အလုပ်နဲ့ Sexy Model တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး သရုပ်ဆောင်အလုက်တော့ မလုပ်ကိုင်သေးပါဘူး။
ဒီနေ့မှာတော့ နန်းမွေစံအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါပြီ။ အဲ့ဒါကတော့ သူမရဲ့ အထွေထွေဆေးကုသခွင့်လက်မှတ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီအဖွဲ့က ရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ ထုတ်ပြန်စာ ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုထုတ်ပြန်စာထဲမှာ ပါဝင်တာကတော့ နန်းမွေစံက မြန်မာ့ရိုးရာဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ သင့်လျော်မှုမရှိသော ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများကို ဖေ့စ်ဘုတ် လူမှုစာမျက်နှာပေါ်မှာ မတင်ဖို့ (၁၄.၁.၂၀၁၉) က မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီဌာနကို ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ပေမယ့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသေးတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဥပဒေ အခန်း(၁၂)၊ ပုဒ်မ(၄၅)၊ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)နဲ့ အညီ နန်းမွေစံရဲ့ အထွေထွေ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို သိမ်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နန်းမွေစံကတော့ ထိုအမိန့်ကြေငြာစာကို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ရင်း “What is human right? where is democracy???” ဆိုပြီး ပြောဆိုထားပါတယ်။
လူတကာ တက်ချင်ပေမယ့်လည်း တက်ခွင့်မရတဲ့ ဆေးပညာကို အချိန်အကြာပြီး သင်ယူခဲ့ပြီးမှ အခုလို ဖြစ်ရတာဆိုတော့ စိတ်မကောင်းစရာပဲနော်။ နန်းမွေစံတစ်ယောက် သူမချစ်တဲ့ ဆရာဝန်အလုပ်ကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဆရာဝနျမလေး နနျးမှစေံက Sexy Model တဈယောကျအဖွဈ အနုပညာလမျးမမှာ နာမညျကွီးသူ တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပုရိသကိုကိုတှေ စှဲမကျစတေဲ့ သူမရဲ့ ခန်ဒာကိုယျကောကျကွောငျးအလှနဲ့ မွနျမာဆနျတဲ့ သူမရဲ့ ရုပျရညျကွောငျ့ အားပေးသူ ပရိသတျအခိုငျအမာ ရရှိထားသူလေးတဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ နနျးမှစေံက လကျရှိမှာတော့ ဆရာဝနျအလုပျနဲ့ Sexy Model တဈဦးအဖွဈ ရပျတညျနပွေီး သရုပျဆောငျအလုကျတော့ မလုပျကိုငျသေးပါဘူး။
ဒီနမှေ့ာတော့ နနျးမှစေံအတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈစရာ အဖွဈအပကျြတဈခု ဖွဈပကျြခဲ့ပါပွီ။ အဲ့ဒါကတော့ သူမရဲ့ အထှထှေဆေေးကုသခှငျ့လကျမှတျကို မွနျမာနိုငျငံ ဆေးကောငျစီအဖှဲ့က ရုတျသိမျးလိုကျတဲ့ ထုတျပွနျစာ ရရှိခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ထိုထုတျပွနျစာထဲမှာ ပါဝငျတာကတော့ နနျးမှစေံက မွနျမာ့ရိုးရာဝတျစားဆငျယငျမှုနဲ့ သငျ့လြျောမှုမရှိသော ဝတျစားဆငျယငျမှုမြားကို ဖစျေ့ဘုတျ လူမှုစာမကျြနှာပျေါမှာ မတငျဖို့ (၁၄.၁.၂၀၁၉) က မွနျမာနိုငျငံ ဆေးကောငျစီဌာနကို ကတိကဝတျပွုခဲ့ပမေယျ့ ဆကျလကျလုပျဆောငျနသေေးတာကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆေးကောငျစီဥပဒေ အခနျး(၁၂)၊ ပုဒျမ(၄၅)၊ ပုဒျမခှဲ(ဃ)နဲ့ အညီ နနျးမှစေံရဲ့ အထှထှေေ ဆေးကုသခှငျ့လိုငျစငျကို သိမျးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
နနျးမှစေံကတော့ ထိုအမိနျ့ကွငွောစာကို သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာပျေါမှာတငျရငျး “What is human right? where is democracy???” ဆိုပွီး ပွောဆိုထားပါတယျ။
လူတကာ တကျခငျြပမေယျ့လညျး တကျခှငျ့မရတဲ့ ဆေးပညာကို အခြိနျအကွာပွီး သငျယူခဲ့ပွီးမှ အခုလို ဖွဈရတာဆိုတော့ စိတျမကောငျးစရာပဲနျော။ နနျးမှစေံတဈယောကျ သူမခဈြတဲ့ ဆရာဝနျအလုပျကို ဆကျလကျလုပျကိုငျခှငျ့ရရှိပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
Previous articleကြောက်စရာကောင်းသော ပဒူကောင်အန္တရာယ်နှင့် အတုပ်ခံရပါက ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ
Next articleFB သုံးတာ ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေကြောင့် ဘေလ် ကုန်ရကျိုး နပ်နေတာပါ မျက်ရည်ခိုင်ရင်တော့ ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်
မိန်းကလေးတစ်ယောက် မူးလဲနေလို့ ကူညီဖို့သွားတဲ့ အခါ
ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်လို အဖြစ်ဆိုးမျိုး မကြုံရအောင် အများသိစေရန်
နောက်ဆက်တွဲသတင်း အင်းစိန်ဈေးတွင် လက်လုပ်ဗုံး နှစ်ကြိမ်တွေ့ရှိ
ငွေဝင် ငွေမြဲစေသော ယတြာ။ လာဘ်​ပိတ်​​နေတာလား၊ ​ဈေး​ရောင်းပါး​နေတာလား၊ လက်​လွန်​ထား​သော​ငွေများ ပြန်​မရတာလား
အဓမ္မပြုခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးစေဖို့ သရဲပူးခံရသလို ဟန်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေတောင် ပြန်လည် အကူအညီ တောင်းလိုက်ရတဲ့ မှော်ဘီကျောင်းက သွေးပျက်ဖွယ်ရာ “ည”
တောင်​ဇလပ် ​ပန်းနီ မိုင်​ချယ် ​ရီ (၂၃) နှစ် အရွယ် နုနယ် လွန်းတဲ့ ကျားရဲ
အကယ်ဒမီပေးပွဲကို ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ လွင်မိုး
နေတိုးကို အတိတ်ဘဝက ကျွန်တော့် သား ကျွန်တော့် ညီလို ခံစားရတယ်လို့ ပြောပြလာခဲ့တဲ့ နေထက်လင်း